“Virtual genocide of Muslim Professionals” by the successive Military Governments | Dr Ko Ko Gyi's Blog
« “ရခိုင်မြောက်ပိုင်းဟာ အာရှရဲ့ ကိုဆိုဗို ဖြစ်လာနိုင်မလား” ၏ အခြားတဘက်
ရခိုင်ဒေသရှိ မွတ်စလင်များအား မမှန်သတင်း ဖော်ပြမူတိုးပွားလာ »
“Virtual genocide of Muslim Professionals” by the successive Military Governments
Lost Generation of Muslims in Myanmar because of the “Virtual genocide of Muslim Professionals” by the successive Military Governments
Even during Racist Burmese-Chinese mixed blooded General Ne Win’s era we could see prominent Myanmar Muslims at high places e.g. U Kar (RASU Rector/Education Minister), Sayar Chair (Election Commission Chairman), Bho Hmu Ba Shin (History Commission), Maung Thaw Ka (Forward Chief Editor), Colonel Tin Soe (Revolution Council member), Ambassadors U Pe Khin and U Hla Maung, U Kyaw Kyaw (Commercial Bank MD), Hajima Pyinmanar Sein Daw Pu, Psychiatrist Prof Dr U Ne Win, Psychiatrist Prof Dr U Khant, Captain U Khin Maung Latt or Haji Hassan Latt UBA (BAC) MD, RASU Chemistry Professor U Aung Khin @ Md Ali, Lt. Col. Dr. Khalid Maung Maung, Prof. U Thein Maung ENT surgeon, U Tin Maung Rector of Universities Computer Center, Lt. Col. Hla Maung FRCS, Prof. Daw Hnin Yee of medicine, Prof. U Pe Win Physician, Dr. Daw Win May ophthalmologist, Surgery Prof. U Ko Win, Dr John Hla Khine anatomist, his brother Lt. Col. Maurice Hla Khine Nephrologist, Major Dr U Tun Nyo ENT surgeon, Paediatric Surgeon Dr U Myo Nyunt and Prof. U Ye Myint surgeon.
After Ne Win’s resignation, there was some minor relaxation of his strict discrimination policy, so we could see few professionals with internal postgraduate degrees. But nowadays there is no more Myanmar Muslims in those kinds of very high places. We could even label as “the Lost Generation of Muslims in Myanmar under the Military Governments”. Why and how this “virtual genocide of Professionals” is done?
Above incomplete list is possible under the non-discriminatory policy of General Aung San and U Nu as you could read in the screenshot. But Bigot General Ne Win started the racial or rather more correctly called, religious discriminatory policy as reported side by side in the screenshot.
“သွေးတူခြင်းထက် စိတ်ကူးတူခြင်း ရှေးဟောင်းနှောင်းခေတ်တွင် ဒိုးတူဘောင်ဘက် ပြုဖူးသည်များကို မှတ်မိခြင်းတို့က အမျိုးသားစိတ်ကို ပိုမိုဖန်တီးလေသည်။”
ဗိုလ်ချုပ်၏ လူမျိုးရေးရာသဘောထားအမြင် (ဒီးဒုတ်သတင်းစာ ဧက ဒသမတွဲ နံပါတ် ၄၁ ဇူလိုင်လ ၂၇ ရက်၊ ၁၉၃၅၊ စာမျက်နှာ ၅၊ ၆)
EQUAL RIGHTS for all the citizens is already in the 2008 CONSTITUTION
ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံ ဥပဒေ (၂၀၀၈) တွင် အောက်ပါအတိုင်း ဖေါ်ပြထားပါသည် –
၃၄၈။ နိုင်ငံတော်သည် ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်၏ မည်သည့်နိုင်ငံသားကိုမျှ
» အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး၊
၃၄၉။ နိုင်ငံသားများသည် အောက်ပါလုပ်ငန်းများကို လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်ရာတွင် တူညီသော အခွင့် အလမ်း ရရှိစေရမည် –
(ဃ) အတက်ပညာနှင့် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းမှု၊
(င) ၀ိဇ္ဖာပညာ၊ သိပ္ပံပညာနှင့် နည်းပညာရပ်များ ရှာဖွေဖော်ထုတ်မှု။
နိုင်ငံသား၊ နိုင်ငံသားများ၏ မူလအခွင့်အရေးနှင့် တာဝန်များ
၃၄၅။ အောက်ဖေါ်ပြပါ အရည်းအချင်း တစ်ရပ်ရပ်နှင့်ပြည့်စုံသူများသည် ပြည်ထောင်စု သမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော် ၏ နိုင်ငံသားများဖြစ်ကြသည် –
(က) ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်၏ တိုင်းရင်းသားမိဘနှစ်ပါးမှ မွေးဖွားသူ၊
(ခ) ဤဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ အတည်ပြုပြဌာန်းလိုက်သည့်နေ့တွင် ဥပဒေအရ နိုင်ငံသား ဖြစ်ပြီးသူ။
၃၄၇။ နိုင်ငံတော်သည်မည်သူ့ကိုမဆိုဥပဒေအရာတွင်တန်းတူညီမျှအခွင့်အရေးရရှိစေရမည်။ ထို့အပြင်ဥပဒေ ၏ အကာအကွယ်ကိုလည်း တန်းတူညီမျှစွာ ရယူပိုင်ခွင့်ပေးရမည်။
၃၆၆။ နိုင်ငံသားတိုင်းသည် နိုင်ငံတော်ကချမှတ်ထားသော ပညာရေးဆိုင်ရာမူဝါဒများနှင့်အညီ-
(ခ) ဥပဒေဖြင့်ပြဌာန်းထားသည့် မသင်မနေရအခြေခံပညာများကို သင်ကြားရမည်။
(ဂ) သိပ္ပံပညာစူးစမ်းရှာဖွေမှု၊ စာပေနှင့်အနုပညာ ခေတ်မီတိုးတက်စေရန် တီထွင်ကြံဆ ဖော်ထုတ်ရေးသားမှုနှင့် ယဉ်ကျေးမှုကိစ္စများတွင် လွတ်လပ်စွာ သုတေသနပြု ဖော်ထုတ် ဆောင်ရွက်ခွင့်ရှိသည်။
၃၈၄။ နိုင်ငံသားတိုင်းသည် ဤဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပါ ပြဌာန်းချက်များကိုလိုက်နာ စောင့်ထိန်းရန် တာဝန်ရှိသည်။
“ONE Burma” advanced concept of General Aung San
1.having to lead together one common life
2.sharing joys and sorrows,
3.developing common interests
4.and one or more common things like racial or linguistic communities,
5.fostering common traditions of having been and being one which give usaconsciousness of oneness and necessity of that oneness.
Source: Bo Gyoke’s speeches and here
၁၉၄၇ ခုနှစ်၊ မေလတွင် မြန်မာနိုင်ငံ၏ ဖွဲ့စည်းအုပ်ချုပ်ပုံအခြေခံဥပဒေ ရေးဆွဲရေးအတွက် ဖဆပလ ပဏာမပြင်ဆင်မှုညီလာခံကို ကျင်းပခဲ့ပါသည်။ ထိုညီလာခံတွင် ဘာသာရေးကိုင်းရှိုင်းသည့် ဒီးဒုတ် ဦးဘချို က လွတ်လပ်ရေးရသည့်အခါတွင် ဗုဒ္ဓဘာသာကို နိုင်ငံတော်ဘာသာအဖြစ် ပြဋ္ဌာန်းရန် သင့် ကြောင်း အဆိုတင်သွင်းသည်။
ဤအဆိုနှင့်ပတ်သက်၍ ဆွေးနွေးကြသည့်အခါ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းက ဦးဘချိုကို အောက်ပါအတိုင်း ချေပပြောဆိုခဲ့ပါသည်။
“… သည်မှာ ဆရာ ၊ ကျွန်တော်တို့က လူကြိုက်အောင် လုပ်နေတာမဟုတ်ဘူး။ သည်လို မဟုတ် မဟတ် ကိုယ်ထင်ရာတွေ လျှောက်လုပ်နေကြမည်ဆိုလျှင် ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ဟာ မကြာမီ ပျက်စီးပြိုကွဲပြီး ကျွန်သားပေါက်ဖြစ်သွားမှာဘဲ။
ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်မှာ အလောင်းဘုရား လက်ထက်ကတည်းက မူဆလင်တွေရှိတယ်။ ဘရင်ဂျီတွေရှိတယ်။ အစတုန်းက ရှိလာကြတဲ့ နတ်ကိုးကွယ်တဲ့ တောင်းတန်းသားတွေရှိတယ်။ အဲသည်တောင်တန်းသားတွေဟာ အင်္ဂလိပ်လက်အောက်တုန်းက တချို့ ခရစ်ယာန်တွေဖြစ်ပြီး အရိုးစွဲ နေကြတာရှိတယ်။
သူတို့တစ်တွေဟာ အားလုံးနိုင်ငံသားတွေပဲ၊ တိုင်းပြည်ကို ကျွန်တွင်းက လွတ်အောင် တိုက်ထုတ်ကြ တုန်းက ကျွန်တော်တို့ချည်းမဟုတ်ဘူး။ သူတို့တတွေ ပါကြတယ်။
ယခု ကျွန်တွင်းက လွတ်မည်မကြံသေးဘူး သူတို့တွေအပေါ်မှာ အနိုင်ကျင့်ပြီး ငါတို့လူများစုရဲ့ ဘာသာကို နိုင်ငံတော်ဘာသာဖြစ်ရမည်လို့လုပ်လိုက်လျှင် ကျွန်တော်တို့ဟာ ခွေးလောက်တောင် သောက်သုံးမကျတဲ့အကောင်တွေ ဖြစ်သွားကြမှာပေါ့ဆရာ။
တိုင်းပြည်ကို တိုင်းပြည်ရေးလို တွေးစမ်းပါ။ ဘာသာရေးတွေ ဘာတွေညာတွေ လုပ်မနေစမ်းပါနှင့်။ ကျွန်တော်တို့ဟာ တိုင်းပြည်တစ်ခုလုံး စည်းလုံးကြဖို့လိုတယ်၊
… ယခုအချိန်မှာလိုချင်တာက ပြည်ထောင်စုထဲမှာ ရှိနေကြတဲ့ လူမျိုးအားလုံး ဘာသာအားလုံး ဘယ်တော့မှ မပြိုကွဲဘဲ ခွဲထွက်သွားမည့်လူတွေ ပေါ်မလာစေဘဲ နိုင်ငံရေးစိတ်ဓာတ် တစ်ခုတည်း ရှိအောင်သွင်းပြီး စည်းလုံးဖို့လိုတယ်။ နိုင်ငံတော်ဘာသာကို ဗုဒ္ဓဘာသာလုပ်ချင်ရင် ဗုဒ္ဓဘာသာနိုင်ငံတော်လို့ ဆရာဘာသာ ဆရာကြေညာ၊ ကျွန်တော် မပါ ဘူး ။
Tags: Aung San, Burma, Chinese people in Burma, Islam in Burma, Maung Thaw Ka, Muslim, Myanmar, Ne Win
This entry was posted on July 26, 2012 at 8:46 am and is filed under Uncategorized.	You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leavearesponse, or trackback from your own site.
3 Responses to ““Virtual genocide of Muslim Professionals” by the successive Military Governments”
July 26, 2012 at 9:16 am | Reply
Royal Dynasty posted in his FB wall:
ကျွန်တော်တို့ မြန်မာနိုင်ငံတွင်ဖြစ်ပေါ်နေသော လူမျိုးရေး၊ ဘာသာရေးပြသနာမှာ
အစ္စလာမ်နဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာကြားဖြစ်ပွားနေသော ပဋိပက္ခမဟုတ်ပါခင်ဗျား။
သို့သော်…အပိတ်ခံထားရသော ပြည်တွင်းရှိ ဗလီများ ယခုအချိန်ထိပြန်ဖွင့်ခွင့်မရသေးပါဘူး
ဒါပေမယ့်…ပြည်တွင်းမှာ ဘိုးစဉ်ဘောင်ဆက်နေထိုင်လာကြသူအများစုမှာ မှတ်ပုံတင်မရရှိကြပါဘူး
တရားဥပဒေရဲ့အရိပ်အာဝါသအောက်မှာ ပြည့်ပြည့်၀၀ ခိုလှုံခွင့်ရှိပါတယ်ခင်ဗျား
အကြောင်းအမျိုးကြောင့်တော့… တောင်ကုတ်မှာ အသတ်ခံရတဲ့ ပြည်တွင်းမှ မွတ်စလင် ၁၀ဦး ကိစ္စတော့ မဖော်ထုတ်နိုင်သေးပါဘူး
အခြေအနေအရပ်ရပ်ကြောင့် စစ်ဘက်၊နယ်ဘက်တွင် နိုင်ငံတာဝန်များကိုထမ်းဆောင်ခွင့်မရပါဘူး
မွတ်စလင်နိုင်ငံများမှ မတရားစွတ်စွဲပြောဆိုမှုများကို အမြန်ဆုံးရပ်တန့်ကြပါရန် နှင့်
အခြေအနေမှန်များကို သုံးသပ်နိုင်ရန် နိုင်ငံတော်မှဦးဆောင်ခေါ်ယူပြသသော နေရာဒေသများကို
July 26, 2012 at 12:10 pm | Reply
July 27, 2012 at 9:18 am | Reply